“Waxaan talo ahaan soo jeedin lahaa in khilaafaadka la iska ilaaliyo, xoogana la saaro fulinta qorshe hawleedka” M/weyne Shariif. – Radio Daljir
Muqdisho, Dec 14 – Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayo khilaafkii keenay gacan ka hadalkii dhexmaray maanta xildhibaanada baarlamaanka iyo talaabadii xildhibaanada baarlamaanka Soomaliya qaarkood ay ku sheegeen shalay inay xilka ka qaadeen afhayeenka baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Soomaliya ayaa u qornaa sidan:
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed, wuxuu maalmahan ku mashquulsanaa kulamo xal loogu raadinayo khilaafaadka kuwaas oo meel fiicansoo gaaray. Haddaba, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoo ka welwelsan degdegga iyo sida kediska ah ee uu ku dhacay Go?aanka ay xubno ka mid ah BaarlamaankaFederaalka KMG ah soo saareen shalay ee ku saabsanaa Xil ka-qaadis GuddoomiyahaBaarlamaanka , ayaa tibaaxay dareenka uu ka qabo tillaabada lama filaanka ah ee uu Baarlamaanku qaaday, wuxuuna yiri: ? Ma ahayn dhacdo cusub laakiin waqtiga uu ku soo beegmay ayaa xasaasi ah, waana dhacdo aan la fileynin oo dareenkeeda leh, walina baaris iyo ka baarandeg ayaan ku jirnaa si aan u helno xaqiiqda dhabta ah iyo duruufaha keenaya go?aankaas.?
Dalku wuxuu ku sugan yahay duruufo gaar ah sida la dagaallanka Al-Shabaab, Fulinta Qorshe-Howleedka (Roadmap) iyo Gaarsiinta gargaarka bino?aadnimo.
Madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray ?waxaan sii wadi doonnaa wadahadalka iyo u kuurgalidda xaaladdan si waafaqsan sharciga, waxaana mudanayaasha Baarlamaanka ugu baaqeynaa iney joojiyaan sii wadidda khiliaafaadka, gartaanna masuuliyadda ka saaran habsami u socodka howlaha Baarlamaanka iyo ilaalinta sharciga?
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, wuxuu adkeeyay ixtiraamka iyo madaxbannaannida Baarlamaanka wuxuuna tilmaamay in Dowladdu ay ku dhisan tahay sharciga, sidaa daraadeed tillaabo kasta oo la qaadayo waa iney waafaqsan tahay Axdiga KMG ah iyo shuruucda kale ee dalka u degsan.
?Waxaan talo ahaan soo jeedin lahaa in khilaafaadka la iska ilaaliyo, xoogana la saaro fulinta Qorshe Howleedka (Roadmap) iyo howlaha culus oo na hor yaala? ayuu yiri Madaxweyne Sharif.
Xafiiska Warfaafinta ee Madaxwaynaha.